Gumaadka Gaza iyo Waji gabaxa Carbeed
Ku dheeraan maayo tibaaxida xaddiga xasuuqa Gaza ka dhacay,oo idaacadaha layska arko ayaaba intiina badani kala socoteen.Si kasta oo la isugu dayona, qoraal kooban lagagama bogan karo gumaadkaas.
Sidaas daraadeed,waxaan kor xaadis ku eegi doonaa qodobo kooban,oo aan is leeyahay waxay u fududayn karaan akhristaha Soomaaliyeed;arkida muuqaalka guud iyo duruufaha ku xeernaa dhacdadan.
Waxaynu abaarri doonaa dhcdadaas, doco kala gedisan:
Mawqifka dalalka Carbeed iyo aduunwayanaha kaleba
Maxa galabsatey,ee lagu galayaa Xamaas
Saadaal iyo gabgabo kooban
Hadaan ku horeeyo dunida Carabta iyo dareenkooda ku aadan gumaadka iyo mashaqada Gaza.Gaar ahaan mawifyada dawladaha Carabta u tunka wayn(dhaqaaale iyo siyaasadba) ama hor booda.
“Waa in Xamaas laga adkaadaa, oo aaney dagaalkan ku guulaysan”
Sidaas waxa madal ka yidhi Xusni Mubaara madaaxwaynaha Masar.
Soohdinta Masar iyo Falstiin wadaagaan,daanta Masaarida ,ciidamo Mareekan iyo Masaari isugu jira,ayaa si wada jir u haya, hawl galo lagu duminayo marinada qarsoodiga ah,ee dagaalyahanada Xamaas hubka ka helaan.Bal ka akhri xiriirkan :http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EF0A3794-B2D0-4A60-BA01-946FD876EB2C.htm
Waxa jira tuhun aad u xoogaysanaya,oo ah in dawlad Masar gacan siyaasadeed siisey Israa’iil,dhinaca kalena,kala dhantaashey dadaalada taakulaynta reer Gaza.
Tuhunkaas,waxa carabka ku dhuftey,madaxwaynaha hadalka cadcad ee wadanka Iraan,Axmedi Najaad,oo badheedhihiisa ka dhiibtey arintaas” Masar waxa dul heehaabeysa daruur tuhun ah,oo ku saabsan kaalinteeda ku aadan Xasuuqa Gaza” ka akhri xiriirkan hoose warkaas oo dhamaystiran http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11005&article=502827&feature
“Xamaas uma qalanto hogaanka Falatiin,waxay muujisey xilkasnimo daro wayn”
Sidaas waxa yidhi boqorka Sucuudiga,oo la kulmey culimo Muslina ah oo ugu
tagay sidii iska Caabinta reer Falastiin gacan loo siin lahaa.Waxayse kala kulmeen af kala qaad iyo quus.
Sucuudiga iyo Masar waxay si toos gaashanka uga daruureen ka qayb galka,kulan madaxeedka Carabta ee dawlada Qatar ku baaqdey.Labadaas dal waxay wada jir u maleegeen dadaalo shirka Qatar(Gadar) lagu mijaxaabinayo.
Waxa jira dalal Carbeed,oo u xusul duubtey,garabsiinta iska caabinta reer Gaza.Dalalkaas waxa laga magacaabi karaa Suuriya iyo Qatar(Gadar).
Waxa la qabtey shirar heer madaxeed is garab yaac ah,uu u danbeeyey shirkii Kuwayt ka dhacay 19-1-09.Waxaana ayaan daro ah,in shirkaas xataa laysku maandhaafey war murtiyeed,lagu taageerayo iskaa caabinta iyo kaalmo dhan 2000 milyan Doolar,oo loo qoondeeyey reer Gaza, cidii kaalmadaaas la gudoonsiinayo,Xamaas mise,taliska fadhiidka ah ee Maxamuud Cabaas!
Arintaasi waxay muujinaysaa qotodheerida khliaafadaaka xukuumadaa Carbeed iyo sida dalal Carbeed u xagal daacinayaan iska caabinta Xamaas
Dhanka kale waxay ka markhaati kacaysaa,maqnannshaha talo iyo dan Carbeed,oo meel looga wada jeedo,wadajirna loo qabyo tiro.
Waxa muuqatey in siyaasada dawladaha Carbeed ku soo gororto ilaalinta talsiyadooda ilka dhacsdey.
Maxay qaban karaan,dawladaha Carbeed?
Dhawaan markii Ruushka iyo dawlada Ukrain isku maan dhaafeen ganacsigii shidaalka,ee ka dhaaxeeyey.Waxa gabaabsi wayn galay shidaalkii dawladaa Yurub ka heli jireen labadaas dal,oo iibiya shidaal aan sidaa u badanayn.Waxay qaylo dhaan afka kala waaxay dalal badan oo reer Yurub ah.
Hadaba saamayn intee leeg, ayey yeelan karta hadii hakad galo shidaalka Carabtu dhoofiso, oo lagu qiyaaso 70% saliida sayladaha aduunka.
Dhanka kale,xayiraada ganacsiga ay la wadaagaan wadamada Israa’iil taageera,waxuu saari karaa dalakaas culays dhaqaale,oo saamayn kara mawqifkooda siyaasadeed iyo garab istaagooda Israa’iil.
Waa hadii aynu meeshaba ka saarno ciidamada Carbeed oo Israa’iil weerar ku qaada ama ku goodiyaba!
Waxa kale,oo ku yaala degaanada Carbeed iyo xayndaabkooda marinada ganacsiga aduunku goosho,kuwooda ugu mudan.Sida marinka Suways,Jabalu Daariq iyo Dardaniilka.Iska dhaaf wax kale, hadii ay wadhaf la istaagaan marinadaas,waxay keeni kartaa culays siyaasadeed oo aan dhagaha laga furaysan karin.
Halkaasi waxa inooga cadaanaysa,in aan Gaza loo hiilin kari waayin,balse ay jirto hagrasho iyo habacasaaan kale.
Raysal- wasaaraha Turkiga ayaa isna la yimid dadaal wayn, oo ku aadan sidii loo joojin lahaa gumaadka ciidamada Israa’iil,isla markaasna muujiyey hiil amaan mudan,oo laga waayay dalal uga ood dhaw Falastiin!
Dhawaan shirkii ganacsiga aduunka ee ka dhacay magaalada Dafos,waxa uu ka baxay shirkii isagoo ka xanaaqsan been uu shubayey Shamon Perez oo ah madaxwaynaha Israa’il,oo dooney inuu ka galgasho masuuliyada xasuuqa Gaza.
Ardogan waxa uu ka baxay madasha isaga oo leh” Israa’iil waxay dili taqaana caruurta!”
Dalalka Boliifiya iyo Finzuela ayaa xidhiidka dublamaasiyeed u gooyey dawlada Israa’iil.Si ay u muujinaya mawqifkooda ku aadan Xasuuqa Gaza.Xili calanka Israa’iil ka dul babanayo caasimado dalal Carbeed,oo ku dhici waayay talaabooyinkaas oo kale.
Mashaqadan ka aloosan Gaza,waxa kale,oo xitaa ka qayliyey Kiniisada Rooma!
“Gaza waxay noqtey Xasbi wadreed lagu ciqaabayo rayid”
Sidaasi waxaa yidhi Kardinal Rinato Martino,oo ah wasiirka garsoorka Dawlad diimeedka Fatikaankahttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/FD7A2DB2-73C8-487E-9FA6-243902F7305E.htm
Dhanka dalalka reer galbeedka,wakhti badan ku lumin mayno.Waayo? Aragtidooda siyaasadeed ee xasarada Bariga dhexe iyo Gazaba,waa mid dhinac u xaglinaysa.
Waxa kale oo arinta Gaza ku ceeboobey warbaahinta madaxbanaanida ku andacoota ee reer galbeedka.
Sida idaacada BBC,oo diidey inay baahiso baaq ama ii dheh gargaar aadaminimo loogu ururinayo dadkii Reer Gaza,ilaa saacadan la jooganna waxa arintaas ka aloosan muran aad u balaadhan.
Maxay galabsatey Xamaas ee lagu galay?
Waxaynu odhan karnaa waxa jira sababo badan oo is biirsdeyoo oo lagu bar tilmaamsadey Xamaas;
Barnaamijkeeda Siyaasadeed oo ka shidaal qaata aragti Islaami ah,isla markaas dhiira galiya fikrada u dhabar adayga iyo iska caabinta Israa’iil.
Ku adkaysiga in Qudus noqoto caasimada dawlada Falastiin,arintaas oo Israa’iil si wayn u diidantahay.
Ku dheganaanta gurya noqoshada qaxootigii reer Falastiin,ee Israa’iil ka bara kicisay degaanadii ay u dhasheen,oo haatan isu rogey dhul Yuhuudu ku dhaqantahay.
Doorshada Israa’iil iyo tartanka u dhexeeya xisbiyada siyaasada Israa’iil,oo mid waliba doonayo inuu u muuqdo xisbi laysku halayn karo,markey noqoto wiiqida iyo muquuninta Falastiiniyiinta.
Xamaas oo xukunka ku hanatey doorasho xor ah, tartan xaashi tiris galay iyo hufnaan siyaasadeed,oo uu goobjooge ka ahaa Jimmy Carter(Madaxwaynihii hore ee dalka Mareekanka) iyo ururkiisu doorashooyinka indha- indheeya.
Taas oo ah bidco iyo dhaqan ay shareysteen dhamaan dawladaha Carbeed ee madaxdoodo kursiga ku daxalaysteen.
Sidaas,awgeed ayay dalal badan oo Carbeed Xamaas dhabarka ugu jeediyeen,oo xataa aqoonsi siyaaseed ugala masuugeen.
Xamaas,oo ka biyo diidsan in wada xaajood siyaasadeed lagu baadi doono dawlad Falastiiniyiintu leeyihiin iyo laalista hanaanka Iska caabinta.
Sidaas daraadeed,Israa’iil waxay mudo ku taamaysay mijaxaabinta xukunka Xamaas,iyadoo qayb libaax ka qaadatey murankii ururka Fatax,ku diidi inuu xilka ku wareejiyo xukuumada Xamaas, ee dooarshada kaga guulaysatey.
Isla markaasna Israa’iil waxay dabada ka riixaysaa maamulka Maxamuud Cabaas,oo ay ku tilamaanto qun yar socod dabacsan,oo ajandaheeda siyaasadeedna meel marin kara.
Dhinaca kale,waxay is tustey Israa’iil iyadoo ka shidaal qaadanaysa, gacan saraynteeda ciidan iyo hubeed,inay muquuniso,oo afka ciida u darto taliska Xamaas,inta aanu xafiiska la wareegin Madaxwayne Obama,ee Mareaykanu ku jiro kala guurka siyaasadeed.
Gabagabo iyo saadaal
Waxa hubaal ah,in Israa’iil gaystey danbiyo dagaal,oo buuraha ka waawayn isla markaasn ay mudanyiin madaxda dalkaasi in lala beegsado maxkamad caalami ah,laguna soo oogo danbiyo dagaal iyo xasuuq wadareed.
Iyadoo taasi jirto,ayaa hadana waa la wada ogsoonyahay inaan dalka Israa’iil dhaqan galin ama ka habran xeerarka jimciyada quruumaha iyo xeerka aduun waynahaba.Codka diidma qayaxan ee Mareenka iyo taageerada buuxda ee uu mar walba la daba taagnayahay awgeed.
Hadaba,inkasta oo ay Israa’iil ku dhawaaqdey xabad joojin dhinac kaliya ah.
Waxa is waydiin leh,inIsraa’ii hanatey yoolkii Siyaasadeed ee dagaalkan ka lahayd iyo in kale?
Hadaba,hadii hadafkeedu ahaa dilista tirada ugu badan ee reer Falastiin iyo gaadhsiinta khaasaraha mood ee ugu balaadhan.Haa;wax wayn baa uga hirgalay ujeedadaas!
Inta la hubo waxa la sheegay,dhaawac gaadhaya 534o iyo dhimasho ah 1317.
Fiiri xiriirka hoosehttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/0BA9192A-4BE5-4511-AC08-11FB6422343B.htm
Hadiise hal-beegeedu ahaa;ridista talsika Xamaas iyo joojinta gantaalada dagaalyahanadeeda.
Maya; may gaadhin guul lagu naalloon karo,oo arintaas kaa aadan.
Kaliya,waxa abuurtey beero cusub oo nacayb ah.Waxaaney samaysay jawi aarsi doon ah,oo dhali kara kumanaan naftood hurre,oo ku kici kara fal celisyo aan la sadaalin karin.
Dhanka kale,waxay xoojisay dooda iyo aragtida kooxaha lagu tilmaamo mayal adkaanta ee jihaad doonka ah,meel kasta oo ay joogaan iyo cid kasat oo ay ku foogan yihiinba.
Waxa kale oo xabaashey rajadii laga qabay,nabad iyo waan-waan wax ku ool ah,oo xasilooni ka abuurta Bariga Dhexe.
Waxa ay xoojisay Xamaas iyo kaalinteeda hormoodnimo(waa ujeedo ka dhan ah,midi Israa’iil uga gol lahayd gulufkan).
Waxa ay galaafatey saamaynta siyaasadeed, ee uruka Fatax iyo Maxamuud Cabaas oo u muuqdey,daba dhilif shacabkiisa aan dan ka lahayn,oo kursi dhiig leh u haliilaya.
Waxay waji gabax dhaxalsiisey dalwaladaha Carbeed ee xiriirka tooska iyo midka dadban la lahaa Israa’l.Waxaana si toos u soo shaac baxay kala taganaanta talisyada Carbeed iyo dadkooda.
Isla markaasna,waxa aad loo saadaalinayaa,in xiisada dagaalkani ku noqon doonto talisyada Carbeed raran siyaasadeed,hadiiba aanu isu rogin duufaan la taga madaxwaynayaal sheeggan.
Dagaalkani waxa uu saansaan colaadeed,oo dihin ka abuurey Barigii Dhexe,ee awalba xasilooni darada la ciirciirayey.
Gumaadkani,waxa uu miino iyo qoon siyaasadeed u aasey, madaxwaynaha cusub ee Mareenka Brack Obama,oo aad loogu hanwaynaa inuu nabad ku soo dabaalo xiisada kacsan ee Bariga Dhexe.
Iskata,oo uu Obama hadalkii caleemo saarkiisa ku baaqey’inuu tixgalin iyo iskaashi kula dhaqmi doono dunida Muslinka”.
Hadana, ma cadda sidaa arintaasi suurtagal u noqonayso,marka la eego raadka dagaalka Gaza iyo gocashooyinkiisa.
Ugu danbayn,dagaalkani waa ragaad iyo qodax ku mudan jiritaanka iyo aayaha danbe dawlada Yuhuuda qudheeda.
Qalinkii : C/raxmaan.M.Muuse
Afeef: Aragtida qoraalkanwaxaa leh qoraag aku saxiixan
Faafin: SomaliTalk.com | Feb 3, 2009
QAYLODHAAN (Gabay cusub) - waxaa tiriyey Inj. Cibaar. Gabayga oo ah maqal iyo akhris....